Hlaing Mahasi Meditation Centre
Welcome To Hlaing Mahasi
This site is developed to createacommunity where pure buddhism (The theravada) can discuss, debate and do the welfare of the whole world. This site is alsoacyber corner to inform about hlaing mahasi monastery's activities, path-way to nivana preach and charity to the world society. We are trying hard to make this web page to give the online discussion, question and answers and the way of practicing meditation to those who interest to do the practicing of Our Buddha's way to nivana. We aim at those people who has willingness to practice our buddha's way to nivana living anywhere arround the world. We are cotributing our technical knowledge, ideas, time and effort for this. We sincerely welcome to your participation, any suggestions and contributions.
More about Hlaing Mahasi please download below flyers.
လှိူင်မဟာစည်ကျောင်းတိုက်ခွဲ(၂) ပြင်ဦးလွင် ၊အနီးစခန်း၊အောင်ချမ်းသာအုပ်စု၊ဝါးပိုးရေရွာ၊ ရွှေစေတီဆုတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားထီးတော်တင်လှူပွဲကို အောက်ပါအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ပါမည်။မိဘဆရာသမားများ၊ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကျိုးဆောင်များ၊အလှူရှင်များ၊ဆွေမျိုးများ၊ အင်တာနက်မှမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နံနက် ၈း၀၀ - ၉း၀၀ စုပေါင်းဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ခြင်း
နေ့လည် ၂း၀၀ - ၃း၀၀ စုပေါင်းတရားနာယူခြင်း
ညနေ ၆း၀၀ - ၇း၀၀ စုပေါင်းတရားနာယူခြင်း
နံနက် ၉း၀၀ တွင်ဌာပနာဘောင်သွင်းလှူခြင်း
နေ့လည် ၂း၀၀ - ၃း၀၀စုပေါင်းတရားနာယူခြင်း
နံနက် ၉း၀၀ တွင်ထီးတော်တင်လှူခြင်း
နေ့လည် ၁၂း၀၀ တွင် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပူဇော်ခြင်း
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံတူ စေတီတော်တစ်ဆူ တည်ထားကိုးကွယ်နိုင်ရန် မြေသန့်မြေနှုတ်ခြင်းမင်္ဂလာ
ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ အောင်ချမ်းသာအုပ်စု၊ ဝါးပိုးရေကျေးရွာရှိ လှိုင်မဟာစည် သီလရှင်ရိပ်သာကျောင်းတိုက် (လှိုင်မဟာစည် တိုက်ခွဲ-၂) တွင် ဉာဏ်တော်အမြင့် (၄၅) ပေရှိ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံတူ စေတီတော်တစ်ဆူ တည်ထားကိုးကွယ်နိုင်ရန် မြေသန့်မြေနှုတ်ခြင်းမင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ယနေ့ ၁၂ . ၁၂ . ၂၀၁၆ (နတ်တော်လဆန်း ၁၃ ရက်) တနင်္လာနေ့၊ နံနက် (၈-နာရီ) ခန့်တွင် ဝါးပိုးရေကျေးရွာ၊ အာရှအလင်းရောင်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးစီး၍ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တော်မူကြပါသည်။
ပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ၁၄ . ၁၂ . ၂၀၁၆ (နတ်တော်လပြည့်) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နံနက် (၇-နာရီခွဲ) ခန့်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်လည်း ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ လှိုင်မဟာစည် တိုက်ခွဲ-၂ သို့ ကြွရောက်သီတင်းသုံးနေတော်မူပြီး ပြုဖွယ်ကိစ္စများ ပြီးစီးသောအခါ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်ကြွတော်မူမည် ဖြစ်ပါသည်။
လှိုင်မဟာစည် ပဓာန နာယက လှိုင်မဟာစည် ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တစန္ဒဝရ ၏ USA ဓမ္မဒူတခရီး
လှိုင်မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ USA ဓမ္မဒူတခရီး မေးမြန်းကြသူ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ကြည်ညိုကြားသိ ကြစေနှလုံးသွင်းဖြင့် post တင်လိုက်ပါသည်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးပဉ္စင်း ဆရာလေးဘုရားတို့နှင့်တူ ကျန်းမာကြည်လင်သော ကိုယ်ကာယ ငြိမ်းချမ်းသောစိတ်နှလုံးဖြင့် ကုသိုလ်ပါရမီများဖြည်.နိုင်ကြပါစေင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
June 24 -July 3ထိ
- Daly Cityမြို့- ထေရဝါဒဓမ္မအသင်း ၌ တရားပွဲ နှင့် retreat - Huf Man Bayမြို့- ဓမ္မနန္ဒကျောင်း၌ ဆွမ်းအနုမောဒနာပွဲ
- Minneapous ပြည်နယ် Chisagoမြို့ သီတဂူကျောင်း၌တရားပွဲ
- Taxes ပြည်နယ် Hcultonမြို့၌ တရားပွဲနှင့် (10)days retreat
- Taxes ပြည်နယ် Austtn မြို့ တရားပွဲနှင့် (3) days retreat
North Carolineaပြည်နယ် အေးငြိမ်းချမ်းသာတရားရိပ်သာ၌ တရားပွဲနှင့် retreat
Newyork နန္ဒသစ္စာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓ ဘာသာတရားရိပ်သာ